RASMI: Xidigii Diirada U Saarnaa Kooxaha Arsenal, Liverpool Iyo Atletico Madrid Ee Alexandre Lacazette Oo Xaqiijiyay In Uu Lyon Ka Baxayo Dhawaan. - Laacib.net
RASMI: Xidigii Diirada U Saarnaa Kooxaha Arsenal, Liverpool Iyo Atletico Madrid Ee Alexandre Lacazette Oo Xaqiijiyay In Uu Lyon Ka Baxayo Dhawaan.
Xidiga kooxda Lyon ee Alexandre Lacazette oo ay doonayeen kooxaha Arsenal, Liverpool iyo Atletico Madrid ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in dhawaan uu iskaga bixi doono kooxdiisa Lyon isla markaana uu tartan cusub ku biiri doono. Arsene Wenger ayuu birtalmaameedka kowaad u yayahay Alexandre Lacazette laakiin sidoo kale Jurgen Klopp iyo Diego Simeone ayaa si wayn xidigan u doonaya.
Waxay u muuqataa in Atletico Madrid ay tahay kooxda uu Alexandre Lacazette ka ciyaari doono xili ciyaareedka cusub isaga oo waraysi uu hadda wargayska L’Equipe baahiyay uu ku qirtay in uu jeclaan lahaa ka garab ciyaarista Antonione Griezmann oo ay isku France yihiin.
Alexandre Lacazette oo la hadlyaay wargayska L’Equipe ayaa yidhi: ” Waxaan filayaa in ay tahay waqtigii ku haboonaa, waxaan doonayaa in aan ogaado wax kale oo aan naftayda cadaadis hoos dhigo isla markaana aan helo heer kale”.
In Lyon ay u soo bixi wayday Champions Leaque-ga ayaa Alexandre Lacazette ku qasabtay in uu go’aankiisa sii shaaciyay balse waxa uu iska diiday in uu si rasmi ah u sheego kooxda uu doortay balse waxaaba si cad looga fahmay hadalkiisa in uu Atletico Madrid ku biirayo.
Alexandre Lacazette markii wax laga waydiiyay in uu jeclaan lahaa ka garab ciyaarista Antoine Greizmann yidhi: “Haa, waxay noqon lahayd sheeko qurux badan haddii aan u tago oo aanu wada ciyaarno. Waa koox wayn oo haysata garoon cusub, sidoo kale waa koox ay ciyaartoydu horumar ku sameeyaan”.
Lyon ayaa Alexandre Lacazette ku doonaysa 50 milyan oo gini iyada oo madax waynaha Lyon uu dhawaan sheegay in Alexandre Lacazette uu ku bixi doono heshiis la mid ah qaabkii uu Samuel Umitti xili ciyaareedkii hore ugu biiray Barcelona oo ah in kooxda doonaysa saxiixani xidigani ay marka hore bixin doonto lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo.
Alexandre Lacazette ayaa 128 gool ku soo dhaliyay 284 kulan oo uu Lyon u soo saftay tan iyo sanadkii 2010 kii uu oo kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray waxayna haddaba u muuqataa in kooxaha Arsenal iyo Liverpool ay Atletico Madrid u waayeen saxiixa Alexandre Lacazette.